Manindry Mafy ny WeChat Sy ny Fampihatra Hafa Fizarana Hafatra Eo Noho Eo i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2014 23:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, বাংলা, English
Hanomboka fanenjehana maharitra iray volana amin'ireo sehatra fandefasan-kafatra eo noho eo, ahitana ny WeChat an'ny Tencent, i Shina amin'ny fikendrena ireo orinasam-pampitam-baovao sosialy.
Tonga moa izao hetsika izao mialoha ny tsingerintaona faha-25 ny fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia notontosaina teo amin'ny kianjan'i Tiananmen.
Araka ny fampahalalam-baovaom-panjakana, dia sampandraharaham-panjakana telo no hanatontosa “bemidina manokana” maharitra iray volana hanaraha-maso ny WeChat sy ny sehatra hafa. Miangavy izay mahatsikaritra ny manampahefana hiantso na handefa mailaka azy ireo. Ho lasibatra manokana amin'izany ny kaonty fanta-bahoaka ao amin'ny WeChat.
Hatramin'ny 2013 ny WeChat no nisolo toerana ny Weibo ho loharanom-baovao ho an'ireo mpisera am-pinday any Shina. Tsy tahaka an'i Weibo kosa ny WeChat fa manana mpisera mavitrika isam-bolana indroa avy heny – 396 tapitrisa – noho ny Sina Weibo izay manana 143,8 tapitrisa, saingy mandefa ny hafatrany manokana kosa ny ankamaroan'ny mpisera WeChat fa tsy mamoaka izany ampahibemaso.
Hatramin'ny 2013 ny WeChat no nisolo toerana ny Weibo ho loharanom-baovao ho an'ireo mpisera am-pinday any Shina.(sary avy amin'ny Weibo)
Manana “kaonty fanta-bahoaka” mihoatra ny roa tapitrisa ihany koa ny WeChat, izay ahafahan'ny sehatra fampitam-baovao, tompon'ny fandraharahana, ary ny hafa rehetra te-hizara ny fomba fijeriny mamoaka lahatsoratra ho an'ny mpanaraka azy ireo tsirairay avy indray isan'andro. Nampisondrotra ireo “self-media” (mametraka ny tenany ho mpampita vaovao) taerana ahafahan'ny fikambanana manangana marika sy mizara vaovao ihany koa izy io.
China Daily nanatsonga ny fanambarana avy amin'ny Biraom-Panjakana misahana ny Vaovao amin'ny Aterineto:
Misy ny olona sasantsasany no mampiasa azy ireny hizaràna voaovao mandratra sy tsy manara-dalàna, mampikorontana tanteraka ny tombontsoam-bahoaka sy ny filaminana ao amin'ny tontolon'ny tranonkala. Ny hetsika dia hikendry ireo kaonty fanta-bahoaka any amin'ny fanaovan-draharaha mandefa hafatra eo noho eo, izay afa-mandefa vaovao amin'ny sehatra midadasika sy afa-manetsika ny mpanaraka azy. Hiadianay mafy ny fidirana an-tsokosoko ataon'ny hery mandrafy avy ato anatiny sy avy any ivelany.
Tsy dia manaitra ny maro loatra ny fanenjehana ny WeChat. Ny famakafakana ny hafatra ao amin'ny WeChat no mampiseho fa arahin'ny mpanao sivana akaiky ilay sehatra. Tsindraindray dia voasakana tsy hita ao amin'ny WeChat ihany koa ny lahatsoratra manokana. Tamin'ny Marsa 2014, nanakatona kaonty fanta-bahoaka ampolony ny manampahefana noho ny famoahan'izy ireo lahatsoratra sy vaovao politika.
Maneho hevitra ao amin'ny Twitter i Bill Bishop, mpanoratra ny taratasim-baovao Sinocism:
Tsy mahagaga aloha raha tafiditra anatin'ny kinendry ny wechat, rehefa hita ny habeny sy ny fitomboan'ny anjara toerany eo amin'ny fandaminana sy eo amin'ny fampielezany vaovao
Nanoratra ny mpisera Weibo “Gong Wenxiang”:
Andro vitsivitsy lasa izay ny CCTV no niresaka momba ny vetaveta ao amin'ny WeChat, tena fanairana hanenjehana an'i WeChat iny, tian'ny manampahefana ny mampihistra ny feo an-tserasera amin'ny fampiasana ny voambolana “fanenjehana ny zava-betaveta”.
Mpisera hafa “Yidong Hulianwang app” manahy fa ho tratran'izay efa nanjò ny Weibo nahitana adihevitra mafana lasa mangina ny WeChat noho ny faneriterena amin'ny alalan'ny fampangatsiahana ireo lazaina fa mpisera Be V, na ireo malaza an-tserasera, natao hatramin'ny Aogositra 2013:
Ny fahatapahan'ny aterineto iray manontolo no antenain'ny manampahefana ho hita. Ny Weibo androany no ho WeChat rahampitso.